आफ्नो काम खोज को लागि तयार प्राप्त | USAHello देखि क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
तपाईं एक काम को लागि देख सुरु गर्न तयार छन्? तपाईंको काम खोज को लागि तयार गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरू छन्. कसरी आफ्नो जानकारी तयार र पत्ता जहाँ लागि जब हेर्न सिक्न.
आफ्नो काम खोज को लागि जानकारी भेला
तपाईं के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा तपाईं काम कौशल सोचिरहेका सुरु छ. के अनुभव तपाईंलाई आफ्नो काम खोज मा मदत गर्नेछ छैनन्? अर्को देशबाट आफ्नो प्रमाणपत्र संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रयोग गर्न सकिन्छ? के दिन, घण्टा, र समय तपाईं काम गर्न इच्छुक छन्? समय को अगाडी यी कुराहरू बारे सोच तपाईं आफ्नो काम खोजी सुरु गर्न तयार गर्नेछ.
तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारी सँगै भेला. तपाईं भर्नका लागि यो जानकारी प्रयोग गर्नेछ कागज काम आवेदन वा अनलाइन लागि जब लागू. तपाईं पनि लेख्न यसलाई आवश्यक हुनेछ आफ्नो रिजुम र आवरण पत्र.
यहाँ तपाईँले भेला गर्न आवश्यक हुनेछ जानकारी छ:
आफ्नो काम इतिहास
काम कस्तो तपाईं विगतमा गरेका? काम कौशल कस्तो प्रकारको तपाईं के? यी प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं थाहा जब कस्तो तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ मदत गर्नेछ. जस्तै, तपाईं विगतमा एक मिस्त्री काम भने, तपाईं फेरि एक मिस्त्री रूपमा काम पाउन सक्षम हुन सक्छ. तपाईं चिकित्सा काम भने, तपाईं एक प्रमाणीकरण कसरी प्राप्त गर्न अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्नो पछिल्लो जब सबै र तपाईं कुनै पनि कार्य अनुभव लेख्न. तपाईँले गरेका प्रत्येक काम को लागि जानकारी को सूची बनाउन, लगायत:
जहाँ तपाईं काम शहर र देश
काम को प्रकार तपाईं गरे
काम मा आफ्नो जिम्मेवारी
तपाईंलाई सुरू र काम समाप्त हुँदा
तपाईं कत्तिको भुक्तानी थिए
किन तिमी काम बाँकी
आफ्नो काम कौशल
आफ्नो कौशल तपाईं कसरी गर्न थाहा केहि हो. तपाईं आफ्नो काम सोच्न भने कौशल साथै प्रकार जब तपाईं छन्, के तपाईंले सही कौशल छ भने तपाईं जब नयाँ प्रकारको लागू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने महसुस हुनेछ.
दुई क्षेत्रमा आफ्नो सीप सोच्न, र तिनीहरूलाई लेख्न:
1. सामान्य काम कौशल धेरै जब लागू गर्ने हुन्छन्. तिनीहरूले हुनुको जस्तै कुराहरू समावेश
समयमा, अनुकूल रहेको, अन्य व्यक्तिसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, सुरक्षित काम गर्न सक्षम रहेको र
चाँडै सिक्न सक्षम रहेको. कौशल यी प्रकार कहिलेकाहीं "नरम सीप।" भनिन्छ
2. काम-सम्बन्धित कौशल यस्तो फोर्कलिफ्ट सञ्चालन गर्न सक्षम रूपमा कुराहरू समावेश, मापन
सही, एक ट्रक ड्राइव, कानुनी कागजात तयार वा सफ्टवेयर सञ्चालन. कौशल यी प्रकार कहिलेकाहीं "हार्ड कौशल।" भनिन्छ
तपाईं अन्य क्षेत्रमा आफ्नो कौशल लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
फेरि एक मिस्त्री सोच्न: एक मिस्त्री सही नाप्ने र उपकरण सुरक्षित प्रयोग को कौशल छ. यी अन्य जब आवश्यक छ कि काम कौशल हो, धेरै. जस्तै, तपाईं निर्माण र पनि खाना पकाउने यी काम कौशल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्नो पछिल्लो शिक्षा
तपाईं आफ्नो शैक्षिक पृष्ठभूमि बारे जानकारी दिन आवश्यक हुनेछ. यो तपाईं उपस्थित विद्यालयहरूको नाम र स्थानहरू समावेश, सुरु र मिति समाप्त र स्नातक कि.
उच्च विद्यालय पूरा गर्न ग्रेड एक फरक संख्या - आफ्नो मूल देशमा शैक्षिक प्रणाली अमेरिकी सिस्टम फरक हुन सक्छ, जस्तै. विश्वविद्यालय सिस्टम तपाईं यहाँ पाउनुहुनेछ ती भन्दा उपलब्धि विभिन्न स्तर हुन सक्छ. कहिलेकाहीं तपाईं मूल-जन्म Jobseekers लागि डिजाइन गर्दै छन् कागजातहरू आफ्नो जानकारी "फिट" हुनेछ.
तपाईं प्रसिद्ध वा हार्ड मा प्राप्त थियो कि एक स्कूल गएका हुन सक्छ. बनाउन रिजुम मा विद्यालयको नाम अन्तर्गत लेख्ने निश्चित. तपाईं जस्तै केही भन्न सक्छौं, "फिलिपिन्समा को प्रौद्योगिकी संस्थान देश मा सबै भन्दा राम्रो विद्यालय मध्ये एक मानिन्छ।"
यदि तपाईंलाई उच्च विद्यालय समाप्त भएन वा कलेज जाने, के तपाईं आफ्नो पछिल्लो शिक्षा सूची जब तपाईं पूरा गरेको छ कुनै पनि अन्य प्रशिक्षण समावेश गर्नुपर्छ. जस्तै, धेरै शरणार्थी शिविरमा वा resettlement पछि नेतृत्व वर्गहरू वा समुदाय स्वास्थ्य प्रशिक्षण लिएका छन्. के तपाईं लिएका छन् कुनै पनि प्रशिक्षण लेख्न गर्नुपर्छ.
तपाईँले एक भन्दा बढी भाषा बोल्न भने, तपाईँको काम खोज मा एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो. निश्चित पनि तल तपाईं बाहेक अंग्रेजी बोल्न हरेक भाषा लेख्न. अंग्रेजी लेख्न छैन. हाकिमहरूले आफ्नो रिजुम पढेर तपाईं अंग्रेजी बोल्न मान गर्नेछ.
थप पढ्नुहोस् रिजुम सुझावहरू र एक रिजुम टेम्पलेट डाउनलोड.
व्यावसायिक उल्लेख तपाईं राम्रो कामदार छन् भन्न हुनेछ मानिसहरू हुन्. तपाईं पहिलो आएका बेला यो सन्दर्भ आपूर्ति गर्न गाह्रो हुन सक्छ. शायद सबै भन्दा वा आफ्नो पछिल्लो काम सन्दर्भहरू सबै अर्को देशमा छन्. तपाईंको सन्दर्भ र तपाईंको कर्मचारी नै भाषा बोल्न सक्छन् यदि तपाईंले विदेशी सन्दर्भ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंको सन्दर्भ अंग्रेजी बोल्छ र तपाईंको कर्मचारी अंग्रेजी बोल्छ भने, वा यदि तिनीहरू दुवै सोमाली बोल्न, तपाईं एउटा सन्दर्भ रूपमा आफ्नो विदेशी कर्मचारी प्रयोग गर्न सक्षम हुन सक्छ.
पढ्न सक्नुहुन्छ व्यावसायिक उल्लेख बारेमा थप. तपाईं पनि हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्छन् एक एक पेशेवर सन्दर्भ सूची लागि टेम्पलेट.
तपाईं आफ्नो सम्पर्क जानकारी को सबै थाहा गर्न आवश्यक हुनेछ, आफ्नो पहिलो ढाँचाबद्ध कसरी गर्ने सहित, मध्य र अन्तिम नाम आवेदन मा, आफ्नो फोन नम्बर, ठेगाना, र इ - मेल ठेगाना. आफ्नो रिजुम मा, तपाईं यस्तो आफ्नो जन्म मिति व्यक्तिगत जानकारी समावेश गर्न आवश्यक छैन, उमेर, वा वैवाहिक स्थिति. तपाईं आवेदन मा जानकारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुन सक्छ. पढ्न रिजुम सुझावहरू र एक रिजुम टेम्पलेट फेला.
तपाईं काम गर्न अनुमति छन् भन्ने कुराको प्रमाण
के तपाईं कानुनी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका मा काम गर्न अनुमति प्रमाणित गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं आफ्नो नियोक्ता आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिन पर्छ. तपाईं पनि एक पृष्ठभूमि जाँच पूरा गर्न र कुनै पनि अपराधहरू छैन तपाईंको कर्मचारी साबित हुन सक्छ.
कस्तो काम खोजीमा अर्को आउँछ?
एक पटक तपाईं आफ्नो जानकारी भेला गरेका छन्, त्यहाँ आफ्नो काम खोज तपाईंलाई मदत गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुराहरू छन्.
काम खोजी नेटवर्किंग
यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईं एक पेशेवर नेटवर्क निर्माण गर्ने. यो तपाईंको सन्दर्भहरू दिन वा तपाईं जब पाउन मदत गर्न सक्छ जसले मानिसहरूलाई जडान अर्थ. आफ्नो पहिलो काम मा, जस्तै, तपाईं संग जब तपाईं काम गर्ने मान्छे चिन्न.
तपाईं आफ्नो समुदायमा काम मेला धाउन सक्नुहुन्छ. कम्पनीहरु अक्सर तिनीहरूले छ काम खुलने बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ जहाँ घटनाहरू पकड, तिनीहरूले खोजिरहेको कर्मचारी को प्रकारको, र तपाईं कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ. एक काम उचित जाँदै गर्दा, बनाउन के तपाईं आफ्नो रिजुम को प्रतिहरू ल्याउन निश्चित. तपाईंलाई रुचि कम्पनीहरु को प्रतिनिधिहरु आफैलाई परिचय, तपाईंले खोजिरहेको काम कस्तो व्याख्या, र आफ्नो जानकारी दिन.
तपाईं गएर आफ्नो क्षेत्रमा घटनाहरू नेटवर्किङ पाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक घटनाहरू पृष्ठ, जाँच LinkedIn आगामी नेटवर्किंग मौका, वा अद्यावधिक लागि साइन अप Eventbrite र Meetup. तपाईं पनि गर्न सक्छन् नेटवर्किङ घटनाहरूको बारेमा थप पढ्न.
अनलाइन काम खोज उपकरण लागि साइन अप
काम खोजी वेभसाइटमा प्रोफाइल सिर्जना गरेर एक पेशेवर उपस्थिति अनलाइन सिर्जना. आफ्नो काम खोज को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय उपकरण हो LinkedIn, CareerBuilder, साँच्चै, र सिसाको ढोका. तपाईं बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ काम अवसर खोज्न कसरी.
स्वयंसेवक प्रयासमा सामेल
समय हुँदा, एक स्थानीय संगठन मा स्वयंसेवक. तपाईं आफ्नो कौशल प्रयोग वा अरूलाई मदत गर्दा नयाँ विकास गर्न सक्षम हुनेछ. तपाईं पाउन को कौशल आफ्नो क्यारियर खोज मा तपाईं लाभ हुनेछ, र तपाईं अमेरिकी संस्कृतिको बारेमा थप जान्न मौका हुनेछ. तपाईं पनि जब तपाईं काम सन्दर्भ आवश्यक आफ्नो तर्फबाट बोल्न सक्षम हुन सक्छ जसले सम्पर्क सिर्जना गर्नेछ. थप पढ्नुहोस् स्वयं र इंटर्नशिप जब.
आफ्नो डिग्री प्राप्त मूल्यांकन
तपाईं आफ्नो डिग्री मूल्यांकन भइरहेको विचार गर्न सक्नुहुन्छ. यो के गर्न, तपाईं ट्रान्सक्रिप्ट मूल्यांकन कम्पनी आफ्नो प्रमाणहरू पेश. कम्पनी आफ्नो पछिल्लो शिक्षा हेर्न र आफ्नो डिग्री वा प्रमाणीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रयोग गर्न मान्य भए भन्न हुनेछ . यो सेवा कहिलेकाहीं महंगा हुन सक्छ.
सबैभन्दा हाकिमहरूले एक मूल्यांकन लागि अनुरोध छैन. यो भने यो जब तपाईं को लागि देख रहे लागि साधारण छ तपाईं सिक्न सम्म कुर्न राम्रो छ. थप पढ्नुहोस् कसरी प्राप्त तपाईंको विदेशी ट्रान्स्क्रिप्ट वा उपाधि मूल्यांकन.
कसरी काम अवसर खोज्न
अनलाइन लागि जब कसरी लागू गर्न
कसरी भर्नका लागि एक कागज काम आवेदन
आप्रवासी लागि काम खोजी सुझावहरू